Nzira yekuziva sei Fake AirPods Pro? Unofanira Kutenga Here Kana Kuti Kwete? - Zvishongedzo
Nzira yekuziva sei Fake AirPods Pro? Unofanira Kutenga Here Kana Kuti Kwete?
Apple izita rakafanana rezvigadzirwa zveprimiyamu-yehunhu hwayo hunoshamisa uye mukurumbira. Nekudaro, mucherechedzo une tsika dzakakwirira unowanzove uine zvigadzirwa zvekunyepedzera zviripo. Yako Apple AirPods Pro haina kudaro. Naizvozvo, zvinova zvakakosha kwauri kuti utarise huchokwadi hweAirpod.
Kana iwe uchida kudzikisa mikana yechitsotsi uye uchitsvaga kuwana chaicho Apple AirPods Pro, ungangoda kufunga nezve ino gwara. Iyo inouya nemazano akasiyana siyana uye nzira dzekutarisa maAirPod ako. Saka ngatitangei nhanho yekutanga yaunofanira kutora:
Shandisa Iyo Apple Webhusaiti Kuziva Fake AirPods Pro:
Kwete yea AirPod chete, asi Apple inopa nhamba ye serial kune yega yega zvigadzirwa zvavo. Na nekudzvanya apa , unogona kuratidza serial nhamba kuti uone kana chiri chigadzirwa chechokwadi kana kwete. Iwe haufanire kunzwa sekunge urikuita chero chinhu chisina kunaka nekutarisa serial nhamba. Chero chero mutengesi chaiye anokugonesa kutarisa serial nhamba. Heano matanho ekutevera:
Iyo serial nhamba yeAirpods Pro iri mukati mekesi.
Bvisa AirPods, uye ipapo uchaiwana.
Inogona kunge iri diki kwazvo. Saka, ungangoda simba rinokudza
Chero nzira, shanyira iyo inotevera chinongedzo pane yako kifaa
Ndokumbirawo unyore pasi serial nhamba uye wobva watarisa-kutarisa kuti uone kuti ichokwadi.
Kazhinji yenguva, Apple inoratidza mhedzisiro uye inosimbisa kana chiri chigadzirwa chaicho. Izvi zvinoderedza mikana yekuwana chigadzirwa chakabiwa ne90% kana kudarika. Kwete nyaya yacho chete, asi maAirPod achange ainewo serial nhamba. Nekudaro, iwe unogona kudzikisa mikana yekuwana chigadzirwa chekunyepedzera.
Nekudaro, vamwe vanhu vaizokupa chaiyo kesi asi yakaderera-mhando kana kugogodza maAirPod. Nezve izvo, tevera inotevera nhanho.
Zviitiko Funga Paunenge Uchitenga Airpod Pro:
1. Tarisa Iko Kuvaka Hunhu
Kunyangwe matanho apfuura achishanda kana kwete, inogara iri zano rakanaka kutarisa mhando yeApple yekuvaka. Zvino, kana iwe uri-wagara uripo mushandisi weapuro, iwe unoto nzwisisa hunoshamisa hunhu hunopihwa neApple. Nekudaro, zvingave nyore kwauri kuti utarise kune aya mapoinzi.
Zvisinei, kana iwe uri mushandisi mutsva weApple, zvingave zvakanaka kuti iwe unzwisise kuti Apple haimbokanganise nehunhu hwezvigadzirwa zvavo. Nekudaro, zvakakosha kuti uongorore Apple AirPods Pro kuti uwane ruzivo rwuri nani nezvechokwadi. Heano mamwe anonongedzera ako:
2. Ruvara rweZvikamu
Apple inozivikanwa nekupa yakajeka mhando yemhando. Kana ikakuunzira iyo 'nhema' ine mavara maAirpod, ichave nhema. Pachave pasina mukana wechena ruvara. Hapana rimwe remavara richasakara kana rinotarisika-rakasviba mune chero nzira. Saka izvi zvinogona kuve kwako kwekutanga kutaurira. Chigadzirwa cheApple chine gloss inoshamisa nekuda kweprimiyamu-zvinhu zvinoshandiswa. Nekudaro, kuratidzwa kwechiedza kunenge kuchipinza, kwete kubhowa, kana kupera.
Zvingaita sekutarisa pagirazi. Zvisinei, izvi zvinogona kutsausa zvishoma. Iwe unogona kutarisa akasiyana akasiyana zvikamu senge ezasi, iwo diffusers, uye maimprints ekuti zvirinani kutariswa kwemavara. Iwo anodhindwa eApple pachigadzirwa chimwe nechimwe akasimba, anoonekwa zvakajeka, pasina kunze kwekusaziva. Kana iyo kesi kana maAirPod akanganisa kana kunyora grey, ingangoita yekunyepedzera.
3. Ongorora Zvikamu
Chikamu chechokwadi cheAirPods Pro chichava neyakajeka kuvaka. Iwe unogona kutarisa iyo kesi's kuvaka mhando uye edza kuvhura uye kuivhara. Kana isinganzwe kutsetseka, inogona kunge iri yekunyepedzera. Pamusoro pezvo, iwe unogona kutarisa kune maspika uye mhando yekuparadzira.
Mazhinji knockoffs ane discoloration nekuda kwekusanganisa zvisina kunaka kwezvinhu kana zvakachipa zvinhu. Zvingave pachena pamiganhu yechinhu chero chipi zvacho. Semuenzaniso, panogona kunge paine sirivheri kana yakasviba lining yakakomberedza iyo inoparadzira kana muviri weAirPods uri chena.
Saizvozvo, hapafanire kuve nechena kuchena kana yekuwedzera yekupenda mumvuri muApple's AirPods. Ivo vanochengeta iyo tema tema yakatwasuka. Chiteshi chemhosva yako chinofanirwa kunge chiri mheni. Kana iri mhando-C kana chero chinhu, zvingangodaro kugogodza.
4. Kubva Mukubwinya - Tenda Unhu Hwako
Iwe unoto nzwisisa iyo mhando Apple yakafanana ne. Naizvozvo, kubva pakuona kwekutanga, ungangokwanisa kutaura kana maAirPod ari echokwadi kana kwete. Iwe unogona kunyatso tevera ako matumbu maitiro kana iri kukuudza iwe kuti hachisi chaicho chigadzirwa.
Ukaramba uchiongorora zvinhu zvacho, ungangowana mutsauko uyu. Saka izvo zvakare zvinokubatsira iwe kudzikisa pasi rechokwadi hwindo.
Kazhinji yenguva, iyo yekunyepedzera inotadza kuteedzera ruzivo rwakazara rweyechokwadi airpod. Panogona kunge paine serial nhamba isipo. 'L kana R' paAirpod imwe neimwe inofanirwa kunge iri yechokwadi uye yakanyorwa. Iyo kesi inokuudza iwe kuti iyo 'Yakagadzirwa neApple Uye Yakaungana MuChina'
Mamwe Mazano Anokurumidza:
Kana iwe usiri kuda kuyambira mutengesi, kana kana iwe uchinzwa kusagadzikana kuongorora maAirpods kana nyaya, heano mamwe anokurumidza matipi ekukubatsira iwe kuona iko kwechokwadi:
Edza kubatanidza iyo Air Pods Pro neako mudziyo. Hazvifanirwe kutora anopfuura masekondi gumi kuti iwe ugadzire uye ubatanidze zvishandiso zvako. Kana zvikadaro, zvinogona kunge zviri zvekunyepedzera.
Apple inoshandisa izwi rakapfava uye rakajeka pakubatana kwayo. Nekudaro, akawanda anogogodza anoshandisa izwi risina simba rinonzwa zvisirizvo. Kazhinji, vanoshandisa kurekodha isiri siginicha yeApple. Saka unogona kuzvitarisa.
Kana iwe usina chokwadi nezve imwe yematanho maviri, unogona kutarisa nzira yekudzima ruzha. Apple AirPods Pro ine ruzha kudzima. Sezvo iri nzira inodhura, akawanda knockoffs haazoisanganise. Kana iwe ukachiyedza, iwe unowanzo kuve unowana kana chiri chigadzirwa chaicho kana kuti kwete.
Chigadzirwa chaicho chinotaridzika kunge chakatsetseka uye 'chiri-mumutsetse' pasina kubhowa kana chero chinhu chekuvaka. Kana paine chero chinhu chiri kuputika senge chinoparadzira, maikorofoni, kana mutauri, zvinogona kunge zviri zvekunyepedzera.
Iwe unogona zvakare kushandisa 'Tsvaga My AirPods Pro' kuti uone kana ichishanda. Kune akawanda emanyepo, izvi hazvimboshanda.
Nguva dzose edza kutenga kubva kune vatengesi vechokwadi, usaende kune vechipiri-ruoko kana vatengesi vatengesi. Iyi ndiyo imwe yenzira dzechokwadi dzemoto dzekuwana chaicho Apple AirPods Pro. Zvisinei, izvi zvinongedzo zvinofanirwa kukwana kana iwe uchinge uchimbopokana
Akanakisa mahedhifoni e iPhone 12
iPhone 12 Models (A2172, A2404)
Is Disney Plus Pasi? Tarisa Urarame Mamiriro Eseva
Hulu vs Sling TV - Ndeipi Yekushambadzira Sevhisi Yakanyanya?
youtube to mp3 converter]
mawebhusaiti ekuona emahara epamhepo mafirimu
apple music chinja kune mudzidzi
sei chromecast kubva pc
yemahara tv show episodes kutenderera
ikozvino unondiona 123movies